Parution du Jeudi, 30 Juin 2022
Archive du 10-juin-2022
Tena zava-doza Lasa fialokalofan-jiolahy ny andrim-panjakana?
Maro ny Fanjakana nifanesy teto Madagasikara tao anatin’ny 60 taona, fa tao anatin’ity Fitondrana Rajoelina ity no nahavakisana raharaha sy afera maloto na «scandales » betsaka indrindra. Maro ireo olona ambony voatonontonana amin’ny kolikoly sy afera avo lenta.
Mihidy anaty rindrin’efatra
Sarotra ny miady hevitra rehefa mihidy ao anatin’ny rindrina firenena ny mpitantana firenena, ka tsy hanaiky ho diso mihitsy, tsy hiaiky ny lesoka sy tsy vonona mba hanitsy izany,
Maro ny Fanjakana nifanesy teto Madagasikara tao anatin’ny 60 taona, fa tao anatin’ity Fitondrana Rajoelina ity no nahavakisana raharaha sy afera maloto na «scandales » betsaka indrindra.
Depiote sady artista Natakalo “spectacle” ny fivoriana
Efa fahazaran’ireo solombavambahoaka no mingitrika sy manao tsidi-pahitra mamonjy ny antenimieram-pirenena.
EPS Bac - kianjan’alarobia Tovovavy mpianatra miisa 5 no bevohoka
Nanomboka ny 07 Jona lasa teo ny adina ara-panatanjahantena bakalorea ho an’Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, haharitra 10 andro.
Antanimena May niaraka tamin’ny trano ilay ramatoa
Nitrangana haintrano mahatsiravina tetsy Antanimena, kaominina Antananarivo omaly alakamisy tokony ho tamin’ny 04 ora maraina.
Fikaonan-doha notarihin’ny CENI Vitsy no tonga, tsy ny rehetra no nasaina
Na ireo solontenana antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ary mpanao politika tonga nanatrika ny atrikasa fikaonan-doha notarihin’ny CENI teny amin’ny Novotel Ivandry omaly aza niloa-bava hoe “Vitsy isika!”.
Pastera Heritiana “Vao mainka hampitombo ny fahotan’ny olona io ITG io”
Mbola hifandroritana eny anivon’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza hatramin’izao ny mety ho fandinihana ilay lalàna momba ny ITG na ny fanalan-jaza.
Madagasikara 65 hatramin’ny 67 taona ny taham-pahavelomana
Faha 13 aty Afrika ankehitriny i Madagasikara raha resaka fananana taham-pahavelomana maharitra no resahana,
Raharaham-pirenena Tratry ny tsindry goavana ny fitondrana
Arakaraka ny maha atomotra ny fifidianana izay voafaritra fa hatao amin’ny taona 2023 no mampitombo ny tsindry mahazo ny Fitondrana Rajoelina.
26 jona ao Ambohidrapeto Ankizy miisa 1.500 no hozaraina arendrina
Toy ny kaominina rehetra manerana ny Nosy dia hanamarika amim-pifaliana ny fetin’ny 26 Jona ihany koa ny kaominina Ambohidrapeto,
Mpitondra tsy mahazaka firenena Miala bala lava, tsy tena manana vahaolana
Ankoatra ny lonilony politika miotrika ahiana hirefotra indray raha tsy voafehy, mitombo ary mihalalina ny krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy eto Madagasikara.
Fiomanana amin’ny fifidianana Betsaka ireo fokontany tsy vonona intsony, hoy ny RPSD
Tanjon’ny CENI moa izany nikarakara izao atrikasa fikaonan-doha izao dia ny mba hisian’ny fifidianana madio mangarahara eken’ny rehetra, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko politika RPSD,
Tsenaben’ny Kabary Hatao ho isan’ny fanoitry ny fizahantany
Ho tontosaina ny 16 hatramin’ny 18 jona izao eny amin’ny zaridainan’Andohalo ny hetsika “Tsenaben’ny Kabary”.
Joseph Yoland “Mila ovaina ny raikipohy teren’ny mpanjanaka ampiharina eto”
Efa nanao ilay hoe “Refondation du système pour le réel développement de Madagascar” ny tenako fony mbola CST, hoy ny mpanao politika, Joseph Yoland.
Kabary malagasy Manakoako maneran-tany
Manakoako maneran-tany ny kabary Malagasy ankehitriny vokatry ny ezaka nataon’ny FIkambanan’ny MPIkabary MAlagasy tarihin’ny filohany Hanitra Andriamboavonjy.
Antsahamasina Ambohidrapeto Nahazo jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro
Ankoatra ny lalana sy ny rano dia anisan’ny mampijaly fatratra ny kaominina Ambohidrapeto, distrikan’Antananarivo Atsimondrano ihany koa ny tsy fisian’ny jiro.
Vono olona miaro halatra Olona 4 no voasambotra tany Andilamena
Lehilahy miisa 03 sy vehivavy iray no nosamborin’ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP Andilamena ny 04 jona teo rehefa namono olona sy nangalatra.
TENY GASY Heloka sy habibiana tsy misy fanamelohana ho faty
Olombelona tahaka ny inona no feno habibiana namono nahafaty an’i Rakotoarisoa Henri, 70 taona, izay fantatra tamin’ny fiarovany ny ala misy mitrandraka amin’ny fomba tsy ara-dalàna.
Fakana an-keriny hafahafa Tovovavy iray indray no nisy nanary teny Ambohijoky
Tovovavy iraay mboa tena tanora erotrerony no hita teny Ambohijoky omaly hariva; rah any angom-baovao teny an-toerana sy ny nambaran’ny depioten’Atsimondrano Andry Ratsivahiny dia nisy nanary teny Ambohijoky ity tovovavy ity.
29-juin-2022 28-juin-2022 27-juin-2022 24-juin-2022 23-juin-2022 21-juin-2022 20-juin-2022 17-juin-2022 15-juin-2022 14-juin-2022 13-juin-2022 10-juin-2022 09-juin-2022 08-juin-2022 07-juin-2022 03-juin-2022 02-juin-2022 01-juin-2022 31-mai-2022 27-mai-2022 25-mai-2022 24-mai-2022 23-mai-2022 20-mai-2022 19-mai-2022 18-mai-2022 17-mai-2022 16-mai-2022 13-mai-2022 12-mai-2022 11-mai-2022 10-mai-2022 09-mai-2022 05-mai-2022 04-mai-2022 03-mai-2022 29-avril-2022 27-avril-2022 25-avril-2022 21-avril-2022 20-avril-2022 19-avril-2022 15-avril-2022 13-avril-2022 12-avril-2022 08-avril-2022 07-avril-2022 06-avril-2022 05-avril-2022 04-avril-2022 01-avril-2022 31-mars-2022 30-mars-2022 28-mars-2022 25-mars-2022 24-mars-2022 22-mars-2022 21-mars-2022 18-mars-2022 17-mars-2022